မျက်နှာပြင် hardening ကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် hardening induction,
ပင်မစာမျက်နှာ / applications ကို / induction ခိုင်မာစေ / induction ခိုင်မာ
အမျိုးအစား: induction ခိုင်မာစေ Tags: တင်းမာ, ကုသမှုမျက်နှာပြင်တင်းမာ, မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းတင်းမာမျက်နှာပြင်, မျက်နှာပြင်တင်းမာမျက်နှာပြင်, ကုသမှု hardening သော induction, ကုသမှုမျက်နှာပြင်တင်းကျပ်သော induction, မျက်နှာပြင်ခိုင်မာသော induction
induction တင်းမာ ကုသ မိုးသည်းထန်စွာတင်မှဘာသာရပ်ဖြစ်ကြောင်းအစိတ်အပိုင်းများအဘို့အမျက်နှာသာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန် applications များ axles, လွှဓါးသွား, ရိုးတံ, တံဆိပ်ခေါင်း, ဗိုင်းလိပ်တံ, ဂီယာနှင့်အများဆုံးအချိုးကျအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်။ ကုသမှု hardening induction ကျယ်ပြန့်မျက်နှာပြင် hardening သံမဏိအသုံးပြုသည်, ဒါပေမယ့် well.Steel တင်းမာ723ºCအုပ်စိုးအပူချိန် (austenitic အပူချိန်) မှပစ္စည်းမှာအပူပြီးတော့မကြာခဏဆိုသလိုစက်မှုတစ်သတ်နှင့်အတူအလျင်အမြန်သံမဏိအအေးပါဝင်ပါသည်ကဲ့သို့သောအခြားပစ္စည်းများနှင့်အတူသုံးနိုငျ ရေ။ ဒီ induction အပူလျှောက်လွှာ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာယင်း၏မာကျော၎င်း၏အထွက်နှုန်းခွန်အားနှင့်၎င်း၏ကြေကွဲတင်းမာမှုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်သံမဏိ၏ဖွဲ့စည်းပုံမှာအသွင်ပြောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်သော induction အပူနှင့်အတူခိုင်မာဖြစ်ကြောင်းသံမဏိ 0.3% ကနေ 0.7% ကာဗွန်ဖို့ဆံ့။
ကျနော်တို့အများအပြားရှိ သော induction တင်းမာဖြေရှင်းနည်းများ အောက်ပါနယ်ပယ်များတွင်:
1. ကုသမှု hardening induction ထိုကဲ့သို့သောအဆို့ရှင်, လက်ကိုင်, Camshaft, ကွန်နက်ရှင်ချောင်းနှင့် starter ကွင်းအဖြစ်အင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းများ
2. induction တင်းမာ ကုသ ဥပမာအား CV ကိုအဆစ်, tulips နှငျ့ရိုးရိုးအဘို့အဂီယာအစိတ်အပိုင်းများ၏
3. ကုသမှု hardening induction ထိုကဲ့သို့သောထိတ်လန့်ကိုစုပ်ယူချောင်းတွေ, စမ်းနဲ့ရပ်ဆိုင်းမှုလက်နက်အဖြစ်ရပ်ဆိုင်းမှုအစိတ်အပိုင်းများ
4. ကုသမှု hardening induction အလိုအလျှောက်ခြင်းနှင့်ကို manual ဂီယာဂီယာအုံ, ဥပမာကွင်း, selector ရိုးတံနှင့်နေရောင်ဂီယာအဘို့အစိတျအပိုငျးမြား၏
5. ကုသမှု hardening induction clutch စမ်းနဲ့ဘရိတ် pads ၏
induction တင်းမာ သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများသို့မဟုတ်အစိတ်အပိုင်းများကိုအပူဖြစ်ခြင်းမှအဆက်အသွယ်မရှိဘဲအပူတစ် controller နှင့်ဒေသခံနည်းလမ်းကမ်းလှမ်းတဲ့သတ္တုအပူကုသမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အပူအပူခံရဖို့အရာဝတ္ထုများတွင်စီးဆင်းရန်လျှပ်စစ်လက်ရှိ inducing အားဖြင့်ထုတ်ပေးသည်။ ဒီအကူးမှုပစ္စည်းများကုသအလွန်, ချွေပစ်မှတ်ထားနှင့်လျင်မြန်စွာအပူပေးစွမ်းသည်။
သံလိုက်သံမဏိအစိတ်အပိုင်းဖြစ်စဉ်ကိုခိုင်မာမြင့်မားသောအကြိမ်ရေ induction ခိုင်မာ